Fiarovana ny mpanjifa: harahi-maso ireo singa mandrafitra ny vidin’entana | NewsMada
Fiarovana ny mpanjifa: harahi-maso ireo singa mandrafitra ny vidin’entana
« Opération vidin’entana ». Izay indray ny hetsika vaovao ataon’ny minisiteran’ny Indostria, ny vartotra sy ny asa tanana (Mica) manoloana ny fiakaran’ny vidin-javatra izao, ireo ilaina andavanandro (PPN), indrindra fa hiditra ny volana desambra izao.
Niara-nivory, omaly, no­tarihin’ny minisitra Ra­kotomalala Lan­to­soa, sy ny sampandraharaha misahana ny zon’ny mpanjifa, ireo lehiben’ny tsena eto an-dRenivohitra sy ny manodidina, sy ny mpitarika sasany mpiaro ny zon’ny mpanjifa. Arovana ny mpanjifa satria tsy takona afenina ny mpanararaotra sasany koa nandray fanapahan-kevitra ny ao amin’ny minisitera, miara-miasa amin’ireo lehiben’ny tsena rehetra, mijery vahaolana.
Rehefa nifanakalo hevitra teo, tapaka fa hojerena izay rehetra mandrafitra ny vidin’entana (structure de prix) hamaritana ny tokony ho vidiny any amin’ny mpanjifa. Fangatahan’ireo lehiben’ny tsena sy ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa amin’ny fanjakana izany, indrindra momba ny vary sy ireo PPN.
Tsy famerana ny vidin’entana akory ny kajy eto, izay tsy azo iverenana intsony, saingy nomarihin’ny minisitra fa tsy maintsy miainga amin’izay mandrafitra ny vidin’entana izay (vidiny hanafarana azy, sandam-bola, fitaterana, fitahirizana, lalana …) ny hikajiana ny tokony ho vidiny any amin’ny mpanjifa. « Tsy isan’andro, na isan-kerinandro izany no tokony hiova », hoy izy. Tsiahivina fa voararan’ny lalàna ny mampiakatra vidin-javatra tsy misy antony mazava.
Koa amin’ity “Opération vidin’entana” ity, hametraka takelaka lehibe isaky ny tsena ny Mica, ho fantatry ny mpanjifa ka takiny ny: vidin’entana, daty farany, fanamarinana ny fandanjana, toromarika misoratra. “Fanabeazana iza­ny na ho an’ny mpanjifa na ho an’ny mpivarotra, izay manana ny zony ihany koa”, hoy ihany ny minisitra. Betsaka ireo tolokevitra avy amin’ny lehiben’ny tsena. Tolokevitra iray, ohatra, mba tsy ho solaitra intsony ny fametahana ny vidin-javatra. Mbola hitohy ny fiaraha-midinika.